Ulaka lwemvelo luyaqhubeka nokuqonga - Bayede News
by nguSolwazi uHamilton Simelane
nguSolwazi uHamilton Simelane
Iziphehlamandla ezintsha zikagesi zingalekelela kokuningi
Eminyakeni engama-20 edlule bekuthi uma kushintsha isimo sezulu okungaba ukushisa ongaphezu kwamandla noma uzamcolo ongenamkhawulo kube nezinkolelo eziningi ngokwenzeka kwalesi simo. Lo mqondo nokucabanga bekudalwa kakhulu ukungafundiseki nokuntuleka kolwazi ngokuguquguquka kwesimokade (climate change) ezwenikazi i-Afrika.
E-Europe nakwamanye amazwe omhlaba bese kuphele iminyaka besiqonda lesi simo, kodwa i-Afrika isilele ngemuva. Ngokucathula kancane i-Afrika igcine isiqala ukuzibandakanya nezinhlelo zamazwe omhlaba ngenhloso yokukhanyiseleka ngokuguquguquka kwesimokade.
Ososayensi bathi kulo nyaka ulaka lwemvelo luqonge ngendlela ebabazekayo ngenxa yesimokade sezulu. Ongoti bososayensi bathi uNtulikazi kube yinyanga eshise ngendlela eyedlulelele emlandweni ezingxenyeni eziningi zezwe ikakhulukazi empuamalanga ye-Europe kwafa amakhulu abantu njengoba amazing okushisa afi nyelele ezi-42.7 degrees celcius kuya ezi-49.5 degrees celcius.
Kube ngokokuqala ukuthi iNorth Pole ifi nyelele ezingeni lama-35 degrees celcius ngoNhlolanja wezi-2018 ekubeni kuyindawo ebandisa okweqhwa. Ngenxa yesimo sezulu esiguquguquka njalo, nempilo yabantu iyathinteka njengoba kuhlasela umkhuhlane obambana amasonto.
Abacwaningi bashaya amakhala ngombiko ngeHIV
INingizimu Afrika ayisele ngaphandle kulesi simo sezulu. Kulezi zinsuku liyayidliva ezingxenyeni eziningi zezwe, kanti kwezinye kuhlasele isomiso. Izangoma zezulu ziqagula ukuthi lisazoqhubeka nokuyidliva nangale kukancibijane, kanti kwezinye izindawo nesomiso sizoqhubeka. Liyidliva nje kweminyeimizi ivaliwe enyakatho nelsifundazwe ezifundeni aMajuba, uMzinyathi, uThukela, iKing Cetshwayo, iZululand naseMkhanyakude ngenxa yesomiso. Lesi somiso kwezinye izifunda sesikhathaze imiphakathi kusukela ngowezi-2014.
UNgqongqoshe Wezemvelo uNkk uBarbara Creecy uthi sezihubela sakusha ngokuphothulwa koMthethosivivinywa iNational Climate Change Bill ozolekelela ekucijeni izwe ngokumele kwenziwe ngokuguquguquka kwesimokade.
nguSolwazi uHamilton Simelane Dec 12, 2019